Microfiber Akpụkpọ anụ Factory, Suppliers - China Microfiber Akpụkpọ anụ Manufacturers
Na -adịgide adịgide Faux Microfiber Pu Akpụkpọ anụ maka mkpuchi oche oche
Eco-friendly Automotive Microfiber Akpụkpọ anụ maka ihe ụgbọ ala
Akpụkpọ anụ microfiber Bensen nwere nguzogide abrasion dị elu, nkasi obi na ike ọdụdọ. Ebe Bensen nwere ụlọ ọrụ nke ya, ọ na -enwe ike ịnye ọnụ ahịa asọmpi na ngwaahịa dị elu karịa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Akpụkpọ anụ Microfiber dị elu maka ụgbọ ala
Akpụkpọ anụ microfiber dị elu nwere nchekasị iyi na -eyi, ume iku ume, nguzogide ịka nká, ịdị nro na nkasi obi, na mgbanwe siri ike.
Akwa na -adịgide adịgide Yellow Microfiber Akpụkpọ anụ maka Automotive
Akpụkpọ anụ Microfiber nwere uru nke nguzogide oyi, na -eyi mgbochi, na -eku ume, na -eguzogide ịka nká, na -adị nro, chebe gburugburu ebe obibi na ọdịdị mara mma.
Akpụkpọ anụ na-egbu nje Red Microfiber maka ime ụgbọ ala
Akpụkpọ anụ microfiber dị mma, mara mma, na -ekpo ọkụ ma na -eku ume. Ọ nwere ọmarịcha akwa na ọmarịcha ogo, yana enwekwa ọganiihu doro anya na akụrụngwa hydrophobic na antifouling.